Jaajarka aan xarigga laheyn oo lagu soo kordhiyo taleefanada casriga ah - Halbeeg News
Jaajarka aan xarigga laheyn oo lagu soo kordhiyo taleefanada casriga ah
Bal suureyso sida ay noqon laheyd haddii la yiraahdo adigoo saacaddaada casriga ah xiran ayey haddana jaajar qaadaneysaa?!!
Bal ka feker aduun uu batariga qalabka aad sidato uu iskiis isu jaajareynayo, dhagaha Bluetooth-ka ee aad isticmaasho iyo sidoo kale taleefanka jeebkaaga ku jira.
Riyada ku aaddan in qalabka casriga ah ee aynu isticmaalno loo jaajareeyo si wireless ah ayaa noqotay mid ku dhabowday qalabka cusub WattUp (Waa qalab qalab casri ah oo loogu talagalay qaadasha iyo gudbinta kaarikada xarig la’qan). “Qalabkan casriga ah wax uu ku soo biiri doonaa tiknoolajiyadda” sidaasi waxaa yiri Steve Rizzone oo ah Maareeyaha shirkadda Energous waa shirkadda qalabka casriga soo saareysa e.
Inkastoo uu qorshahani weli socdo hadana Energous weli ma shaacin taleefanada lagu isticmaali doono Qalabkan casriga ah.
“Sanadkii hore markii aan shirkadda Energous ku soo biiriyay soo saarista jaajarka aan xarigga laheyn waxey iska aheyd riyo balse iminka waxaa jiro shirkado aan kala kaashaneyno inaan soo saarno qalabkan” ayuu yiri Steve Rizzone.
Waxyaabaha ay qalabyada yaryar oo dhan ay ka siman yihiin waxaa kamid ah marka laga soo tago xajmigooda aadka u yar in ay ka siman yihiin in ay isticmaalaan dab aad u yar halka jaajarada xarigga lehna ay u baahan yihiin daba aad u badan.
Qalabyada batariyada yaryar leh waxa ay ku jaajareysmi doonaan nus saac ama saacad wax aan dhameyn.
Madaxweynaha cusub ee Puntland oo shir guddoomiyay kulanka golaha wasiirada
Xulka da' yarta Itoobiya oo xaqiijiyay ka qeybgalka tartanka nabadda iyo saaxiibtinimada ee Geeska Afrika